Xog-Xasaasi ah-NISA iyo VillaSomalia oo doorashada isku khilaafay. | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Xog-Xasaasi ah-NISA iyo VillaSomalia oo doorashada isku khilaafay.
Xog-Xasaasi ah-NISA iyo VillaSomalia oo doorashada isku khilaafay.
Khilaafka doorashada Soomaaliya ayaa markan u gudbay Villa Soomaaliya iyo shaqsi kamid ah kuwii ugu dhawaa ee xagga amaanka. Waxaa uu ismari waagan u dhaxeeyaa sida xogta lagu helayo madaxweyne Farmaajo iyo Korneyl Cabdullahi Daahir oo loo yaqaano Cabdullahi Dheere kuna magacaaban taliyaha dabagalka ee NISA, iyadoo uu salka ku hayo qabashada doorashada iyo magaalooyinka maamul goboleedyada.
Previous articleXOG: Khilaafyo iyo caqabado hor leh oo hareeyey doorashada Somalia, dibna u dhigi karta
Next articleJubbaland oo naqdisay socdaalkii Ra’isul Wasaaraha kuna tilmaamtay mid aysan waxba…